Antontan-taratasy ara-tantara - Church of God World Switzerland
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Tantara ara-tantara
Ny fanekem-pinoana (Credo, avy amin'ny teny latinina hoe "Mino aho") dia famintinana ny finoana. Te hanisa fahamarinana manan-danja izy io, hanazava ireo fanambarana ara-potopampianarana, hanasaraka ny fahamarinana amin’ny fahadisoana. Matetika izy io no nosoratana tamin'ny fomba mora azo tsianjery. Misy andinin-teny maromaro ao amin’ny Baiboly manana toetran’ny fanekem-pinoana. Nampiasa an’ilay tetika nifototra àry i Jesosy 5. Mosesy 6,4-9, ho fanekem-pinoana. I Paoly dia manao fanambarana tsotra, toy ny credo ao 1. Korintiana 8,6; 12,3 sy 15,3-4. ihany koa 1. Timoty 3,16 manome fanekem-pinoana amin'ny endrika henjana mafy.
Tamin'ny fiparitahan'ny fiangonana voalohany dia nipoitra ny filàna fanekem-pinoana iray izay naneho ny mpino ny fampianarana lehibe indrindra amin'ny fivavahany. Ny fanekem-pinoana nataon'ny Apôstôly dia voatonona anarana toy izany, tsy noho ny apôstôly voalohany no nanoratra azy io, fa satria mamintina tsara ny fampianaran'ny apôstôly izy io. Ny Rain'ny Eglizy Tertullian, Augustine sy ny hafa dia nanana kinova kely momba ny fanekem-pinoan'ny Apôstôly; Ny lahatsoratr'ilay pirminus (manodidina ny 750) dia noraisina ho endrika mahazatra.
Rehefa nitombo ny Eglizy, dia nitombo koa ny fivavahan-diso, ary tsy maintsy nanazava ny fetran’ny finoany ny Kristianina voalohany. Tany am-piandohana 4. Tamin’ny taonjato faha-325, talohan’ny nanorenana ny kanônan’ny Testamenta Vaovao, dia nisy fifandirana momba ny maha-Andriamanitra an’i Kristy. Mba hanazavana io fanontaniana io, noho ny fangatahan’ny Emperora Constantin, dia nivory tao Nicée ny eveka avy amin’ny faritra rehetra amin’ny Fanjakana Romanina tamin’ny 381. Nosoratan’izy ireo tao amin’ilay antsoina hoe Fanekem-pinoan’i Nicée ny nifanarahany. Tamin’ny taona dia nisy synoda iray hafa nivory tao Constantinople, izay nohavaozina kely ny Konfesy Nizeriana ary nitarina mba hampidirana teboka vitsivitsy. Ity dikan-teny ity dia antsoina hoe Nicene Constantinople na koa fohy Nicene Creed.
Tamin'ny taonjato manaraka dia nivory tao an-tanànan'i Chalcedon ireo mpitondra fiangonana mba hanoro hevitra, ankoatra ny zavatra hafa, momba ny toetran'Andriamanitra sy ny olona. Nahita fomba fiasa izay ninoany fa mifanaraka amin'ny filazantsara, ny fotopampianaran'ny apôstôly, ary ny soratra masina. Antsoina hoe famaritana Kristianisma ny paikady momba ny Chalcedony na ny Chalcedonian.
Mampalahelo fa ny salanisa dia mety ho raiki-pohy, be pitsiny, abstract ary indraindray mitovy amin'ny "Soratra Masina". Raha ampiasaina amin'ny fomba marina kosa izy ireo dia manome fototry ny fampianarana miorina tsara, miambina ny foto-pinoana ara-baiboly marina ary mamorona fifantohana amin'ny fiainana fiangonana. Ireto fahalalàna telo manaraka ireto dia eken'ny ankamaroan'ny Kristiana ho ara-Baiboly sy toy ny fandrafetana orthodoxy kristiana marina (orthodoxy).
Isika mino Andriamanitra, Ray, ny Tsitoha, Mpamorona ny lanitra sy ny tany, izay rehetra hita sy tsy hita. Ary ho an'i Jesosy Kristy Tompo, Zanaka lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray talohan'ny fotoana rehetra, fahazavana avy amin'ny mazava, Andriamanitra marina avy amin'ilay Andriamanitra marina, teraka, tsy noforonina, niaraka tamin'ny Ray, izay nahariana ny zava-drehetra, manodidina antsika olombelona ary noho ny famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra ary nahazo nofo avy tamin'ny Fanahy Masina sy Maria Virjiny sy olona ary efa nohomboana tamin'ny hazofijaliana ho antsika ambanin'i Pontius Pilato ary nijaly sy nalevina ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niverina tany an-danitra ary niverina mipetraka ny tanana ankavanan-drazana ary hiverina amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty izay tsy hisy farany ny fanjakany.
Ary ho an'ny Fanahy Masina, ny Tompo sy mpanome fiainana izay avy amin'ny Ray, izay ivavahana sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka izay miteny amin'ny alàlan'ny mpaminany
manana; amin'ny fiangonana masina sy katolika [ny fifamalianana rehetra] sy ny fiangonana apostolika. Isika manaiky ny Batisa iray hamela heloka; miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainan'ny tontolo ho avy isika. Amen.
(Notsongaina ao amin'ny JND Kelly, Fiekena Kristiana taloha, Göttingen 1993)
Ny faneken'ny Apôstôly (tokony ho tamin'ny 700 am.fan.ir.)
Mino an'Andriamanitra Ray aho, ny Tsitoha, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany. Ary ho an'i Jesosy Kristy, Zanaka lahitokana, Tompontsika, noraisin'ny Fanahy Masina, naterak'i Maria Virjiny, naterak'i Pontio Pilato, nohomboana, maty ary nalevina, nidina tao amin'ny fanjakan'ny maty, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, Niakatra tany an-danitra, nipetraka teo an-tanana ankavanan 'Andriamanitra Ray izy; Avy ao izy no hitsara ny velona sy ny maty. Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana Kristiana masina, ny fiombonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
Famaritana ny firaisan'olombelona sy ny toetran'ny olombelona ao amin'i Kristy
(Filàn'i Chalcedon, 451 AD)
Araka izany, manaraka ny ray masina, isika rehetra dia miara-mampianatra mampiaiky an'i Jesosy Kristy Tompontsika ho Zanaka tokana; ny iray dia tonga lafatra ao amin'ny andriamanitra ary mitovy tanteraka amin'ny zanak'olombelona, ​​ilay Andriamanitra marina sy olombelona tena izy avy amin'ny fanahy sy vatana misaina, miaraka amin'ny Ray ho (homooúsion) an'ny Andriamanitra ary mitovy amin'ny antsika araka ny maha-olombelona, mitovy amintsika amin'ny lafiny rehetra, afa-tsy ny ota. Teraka talohan'ny fotoana tsy avy amin'ny Ray araka ny Andriamanitra, fa amin'ny faran'ny fotoana, toy izany koa, ho antsika sy ho famonjena antsika avy amin'i Maria, Virjiny sy Renin'Andriamanitra (theotokos), dia [teraka], toy ny iray ihany, Kristy, zanaka, tera-tany, fantatra amin'ny natiora roa tsy mifangaro, tsy miova, tsy mizara, tsy mizara. Raha manao izany, ny fanavahana ny natiora dia tsy foanana velively ho an'ny firaisankina; fa kosa, ny mampiavaka ny tsirairay amin'ireo natiora roa dia voatahiry ary mitambatra mba hamorona olona sy hypostasis. [Niaiky azy izahay] tsy mizara roa sy misaraka amin'ny olona roa, fa amin'ny maha-Zanaka tokana, Andriamanitra, Logos, Tompo, Jesosy Kristy, tahaka ireo mpaminanin'ny taloha momba azy [Jesosy] sy ny tenany, Jesosy Kristy dia nanome torolàlana antsika ary natolony taminay ny tandindon'ny Ray [Creed of Nicaea]. (Voatonona avy amin'ny fivavahana taloha sy ankehitriny, natontan'i Betz / Browning / Janowski / Jüngel, Tübingen 1999)
Taratasy ara-tantara ao amin'ny fiangonana kristiana